Ny tanky GFS dia ampiasaina betsaka amin'ny fitahirizana rano famokarana indostria. Afaka mitondra rano na rano manokana izy, toy ny brine, rano voadio, rano deionized, rano masira, rano malemy, rano RO, rano deionized ary rano madio. Ny fiara mifono vy avy amin'ny orinasanay dia natambatra avy amin'ny takelaka vy vita amin'ny titanium manokana, fitaovana fanisiana tombo-kase manokana, baravarankely mihidy ary fitaovana hafa, miaraka amina fiainana efa ho 30 taona. Aorian'ny fehitohahezana, ny takelaka vy vita amin'ny titanium dia c ...
Mora ny mametraka, mitantana ary mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny kalitaon'ny rano. Amin'izay fotoana izay, ny fanadihadihana fototra ary ny famolavolana ny fiara mifono vy dia ny antoka fototry ny fampandehanana ny tanky lehibe. Araka ny fenitry ny indostrian'ny solika dia tsy maintsy tanterahina amin'ny fizotran'ny fanadihadiana ara-javaboary ara-teknolojia, arakaraka ny fototra ankapobeny. tany malefaka, havoana tendrombohitra ary fananganana tany manokana, voaporofo tranga tsirairay avy ary mametraka ny tandrefana ...
Ny tanky GFS dia manana hery fanoherana mahery vaika ary ampiasaina betsaka amin'ny mitahiry asidra sy ranon-javatra alkali ao amin'ny zavamaniry indostrialy. Nalefa taminny velon ny fantsom-by ny enamel, ary avy eo dia nanodinkodinana natao betsaka mba hahatonga ny tampon ny takelaka vy. Ny velarandrano Enamel dia malama, mirehitra ary mihisy tombo-kase manokana misy tombo-kase manokana, mety ho an'ny tanjona fitahirizana ranon-javatra samihafa. Fepetra fitehirizam-bokatra amin'ny rano fitehirizana ny rano raha toa ka feno ny fandoroana ny fitoeran-jiro mitahiry ny simika ...